news2dago | Novambra 2009
[Ankapobeny ] 17 Novambra, 2009 10:05
Mety mbola hiblaogy aho afaka 20 taona
Lasa tagy ity fanotaniana faharoa ity tatsy @ blaogy tatsy ambadika. Efa tena lasa tandra vadikoditra moa ity miblaogy ity raha ho ahy manokana asa ianareo raha toa ahy. Faniriko hatrizay moa ny mba hanokatra siteweb izany tany aloa tany hoe mba hilaza vaovao sy ny sisa rehefa tena dinihina kay ilay hetaheta io dia tena orinasa irey manotolo ilay izy fa tsy vitan'ny olona iray. Sendra nandalo tato @ serasera aho no nahatsikaritra fa misy blaogy ato ka dia niditra namorona lahatsoratra heritaona mahery lasa izay tao @ blaogy.org no voalohany saingy tsy dia misy mpandalo firy ao ka nivadika tato @ ity blaogy.com ity ka dia tamana tokoa moa izany.
Dia tena varina marina tokoa mandinika ny fotoana lany eto efa mahatratra 259 hono ny lahatsoratra vitako t@ izay fotoana nanaovako blaogy izay ary ny hevitra efa mihaotra ny roa arivo mahery. Tao ny hevitra tsara tao kosa ireo hevitra voatery nofafako satria nanopa sy niteny ratsy fotsiny no nataony. Voatery nanoratra tany @ hery mihitsy moa t@ izay nanao oe azo sivanina ve izy ity. Tsotra ny valiteny nanao oe tsy misy fika io de tsy maintsy namafa sy nijery matetika no natao.
Hifarana ity ny taona 2009 mbola eto ihany a ity na dia somary mahalana ary vao afaka namoaka lahatsoratra satria mbola be koa ny adidy miandry atsy ambadika. Na izany ary dia tsy maintsy mahajery ny feeds vaovao a isaky ny manokatra aterineto. Ka hoy aho oe mbola hiblaogy a @ taona ho avy sy ny taona mbola hanaraka rehetra eo raha mbola velon'aina. Misy azy indray rehefa manan-jafikely mbola hiblaogy iaraka @ zala eto izany kle. Miaraka mijery mamakely @ zafikelin'i kdaomba eto marina.